Ogige ndị kasị ibu na Spain: Site Oriente ruo Fórum | Njem akụkọ
Louis Martinez | 12/05/2022 15:00 | España, Nduzi
Mgbe a bịara ikwu okwu nnukwu square na Spain, ọnwụnwa mbụ anyị nwere bụ ime ya site n’ọtụtụ ámá ndị jupụtara ná mba anyị. Otú ọ dị, anyị ga na-emehie ihe n'ihi na ha abụghị ndị kasị ibu.
N'ezie, Spain nwere ụfọdụ magburu onwe n'ámá juputara na ncheta na akụkọ ihe mere eme. Ha niile mara mma nke ukwuu, n'agbanyeghị na anyị ga-eme ka ị pụta ìhè na-enweghị atụ nke Salamanca ma ọ bụ ọ dịghị obere mara mma nke Madrid. N'otu aka ahụ, anyị nwere ike ịgwa gị banyere ndị ọzọ dị umeala n'obi ma dị oke ọnụ ahịa, dị ka Chinchon ife nke Almagro. Agbanyeghị, anyị chọrọ ịgwa gị gbasara ogige ndị kacha ibu na Spain ma ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ha ga-eso. Ha bụ ndị anyị ga-egosi gị.
5 Plaza de Oriente (Madrid), karịa otu n'ime ogige ndị kasị ibu na Spain
6 Plaza nke Spain (Seville)
7 Plaza Mayor nke Medina del Campo
Forum Square, na Barcelona
Ikekwe anyị ekwesịghị ịgụnye oghere ọha a na njem anyị, ebe ọ bụ na a na-akpọkwa ya Ogige Nzuzo. Ọ bụghị ihe ndaba, ebe ọ nwere ihe dị ka square mita 160 ma jikọọ Barcelona na San Adrián del Besós.
Ọ e kere na 2004 na a imewe nke Ịlaịja Torres y Jose Antonio Martinez dị ka isi ụlọ ọrụ maka Nzukọ Omenala Eluigwe na Ala nke e mere n'afọ ahụ n'obodo Catalan, n'ihi ya aha ya. Na kwa nke ya kasị emblematic ụlọ: Forum, ọrụ nke Jacques Herzog y Pierre deMeuron, nke taa bụ ụlọ Museum of Natural Sciences nke Barcelona.
Akụkụ bụ isi nke oghere ahụ na-achịkwa nnukwu fotovoltaic panel, ụfọdụ pergolas a na-akpọ Los Pajaritos, ọhịa nke ogidi na ọtụtụ ebe nkiri dị egwu iji jide ihe ngosi. Ma, na mgbakwunye, ọ nwere ebe abụọ ọzọ dị nta: ogige Campo de la Bota na Ụlọ Nzukọ.
Echiche nke Plaza de Colón, na Madrid, otu n'ime ndị kasị mma n'etiti ndị kasị ibu square na Spain
Obere karịa nke gara aga, mana ọ dịkwa oke egwu bụ square Madrid nke nwere square mita 37. Ọ dị na confluence nke okporo ụzọ Goya na Génova na Paseos de la Castellana na Recoletos.
Ọ na-enweta aha ya site na ubi na ihe ncheta ka Christopher Columbus nke na-achị ya. Nke a na-anabata ụdị neo-Gothic ma guzobe ya na njedebe nke narị afọ nke XNUMX. Ọ na-anọchi anya ya ngụkọta elu nke iri na asaa mita, ọ bụ ezie na akpụrụ akpụ n'onwe ya, ọrụ nke Jeronimo Sunol na mabul ọcha, ọ tụrụ atọ.
Maka ndị ahụ a kpọtụrụ aha Ubi Nchọpụta, n'okpuru ha bụ Fernán Gómez Ụlọ ihe nkiri Art Center, bụbu Cultural Center nke Villa de Madrid. Ugbua n'elu ya, ị nwere ike ịhụ ihe ncheta ọzọ, nke a raara nye kpọmkwem maka nchọpụta America, ọrụ nke Joaquin Vaquero Turcios. Nakwa ọkọlọtọ Spanish kachasị ukwuu n'ụwa, nke nwere mpaghara 294 square mita nke ewelitere n'osisi iri ise.
N'ikpeazụ, na confluence nke square na Génova n'okporo ámá bụ Ụlọ elu Columbus na, n'ụkwụ ya, n'àgwàetiti ahụ, ihe oyiyi nwanyị nwere enyo, nke onye Colombia Ferdinand Botero.
Plaza nke Spain, na Madrid
Anyị anaghị ahapụ isi obodo nke obodo anyị iji gosi gị ọzọ n'ime nnukwu ogige na Spain nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke gara aga, ebe ọ na-atụ mita 36. Okporo ụzọ Gran Vía, Princesa, Bailén, Ferraz, Leganitos na Cuesta de San Vicente na-agbakọta na ya.
Ọtụtụ ụlọ ihe nnọchianya nke obodo ahụ gbara ya gburugburu. Ọ bụ ikpe nke Ụlọ elu Madrid, nke, nke nwere otu narị mita na iri anọ na abụọ n'ịdị elu, bụ otu n'ime ụlọ elu ndị mbụ na isi obodo, ebe ọ bụ na e wuru ya na 1960. Na kwa nnukwu ihe. Ụlọ nke Spain, nke dị na njedebe nke Gran Vía.
Ma obere ọrụ karịa ndị a na n'eziokwu karịa mara mma bụ Ụlọ Gallardo, ọla nke modernism site Federico Arias King dechara na 1914. Ma anyị agaghị echefu ụlọ nke Ụlọ ọrụ Royal Asturian Mining Company, ịma mma ọzọ nke nnukwu alfonsine ma ọ bụ ụdị eclectic sitere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX. N'ikpeazụ, ihe ncheta ka Miguel de Cervantes na-achị Plaza de España site na etiti ya. Ọ bụ ọrụ nke Rafael Martinez Zapatero na Lorenzo Coullaut Valera na ọ na-anọchi anya onye edemede nọ ọdụ na Don Quixote na Sancho na-agba n'okpuru ọnụ ọgụgụ ya.
Plaza nke Spain na Barcelona
Anyị na-aga n'ihu na njem anyị nke nnukwu oghere na Spain na otu n'ime nke gara aga dị na Barcelona. Na 34 square mita, ọ dị ntakịrị ntakịrị, ma ọ dịghị obere mma. Ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ mere ya Josep Puig na Cadafalch y Guillem Busquets, ọ bụ ezie na onye na-ahụ maka imecha ya ga-abụ Antoni Darder.
E wuru ya maka ndị Ihe ngosi International nke 1929 dị ka ohere na Montjuïc, isi ebe ngosi ihe ngosi ahụ. N'ezie, a ka na-echekwa ihe ncheta site n'oge ahụ, dị ka ndị Obodo Spanish ma ọ bụ ochie bullring, a neo-Mudejar ọla nke Augustus Font taa ghọọ a ụlọ ahịa center, na Ụlọ elu Venetian de Ramon Raventos ma ọ bụ German Pavilion, a ebube nke oge a ije n'ihi Mies van der Rohe kwuru.
N'otu aka ahụ, na etiti nke square e nwere nnukwu isi iyi kere José Maria Jujol ma ndị na-akpụ akpụ chọọ ya mma Michael Blay y Miquel na Lucia Osle. N'iji njirimara oge ochie, ọ na-anọchi anya ihe atụ nke ọdịdị ala na akụkọ ihe mere eme nke Spain na ihe nnọchianya nke oke osimiri ya, osimiri ya na ụfọdụ ihe osise mara mma dị ka. Saint Teresa nke Jisos, Isabel onye Katọlik o James I nke Aragon.
Plaza de Oriente (Madrid), karịa otu n'ime ogige ndị kasị ibu na Spain
Obí eze dị na Plaza de Oriente
N'ịbụ nke dị na etiti isi obodo Spanish, ọ nwere ihe dịka mita 32. Udi ya bụ akụkụ anọ nwere bọọdụ gbagọrọ agbagọ ma jiri ya mee ya Narciso Pascual na Colomer na 1844. Ọzọkwa, eleghị anya ọ bụ ihe kasị mkpa na ihe niile anyị gosiri gị ugbu a.
N'ihi na ya n'ebe ọdịda anyanwụ akụkụ ọ na-delimited site na nnukwu Obí eze, wuru site n'usoro nke Philip nke Ise na narị afọ nke XNUMX na foduru nke ochie Alcázar. N'otu aka ahụ, n'ebe ọwụwa anyanwụ ọ na-akpụ akpụ site na Thelọ ihe nkiri nke Royal, Madrid Coliseum maka opera nke meghere na 1850 na, n'ebe ugwu, nke Ebe obibi ndị mọnk nke Royal nke incarnation, eze nwanyị tọrọ ntọala Margaret nke Austria, nwunye Philip II, na narị afọ nke XNUMX.
Ma, na mgbakwunye, Plaza de Oriente pụtara maka ọmarịcha ubi ya. Ọ bụghị banyere ndị kere site Francesco Sabati, nke na-abụghị nke square ma n'obí, anyị na-adụ ọdụ ka ị na-ahụ Central ubi, nke akwụkwọ ọnụahịa baroque, nke Lepanto y nke Cabo Noval, ha niile nwere ihe ọkpụ akpụ nke ha.
N'etiti ndị a na-anọchi anya ihe ncheta Philip IV mere site Pietro tacca, kamakwa ihe oyiyi nke ndị eze Spanish, nke sitere na oge Visigoth ruo Ferdinand I nke Leon. N'otu aka ahụ, n'ubi Cabo Noval ị nwere ike ịhụ ihe ncheta nke onye agha a kere Mariano benlliure na nke Lepanto, ọzọ nye Captain Melgar, ọrụ nke Julio Gonzalez Pola.
Plaza nke Spain (Seville)
Plaza de España na Seville
Nke a na-amanye square kere maka Ibero-American ngosi nke 1929. Ọ dị na ogige Seville nke María Luisa ma ọ bụ n'ihi onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Hannibal Gonzalez, onye kere oghere ọkara elliptical nke 31 square mita nke ọmarịcha ụlọ dị ihe dị ka otu narị mita na iri asaa.
Ụdị a na-anọchi anya nnabata Spain na mba ndị Ibero-America. Ọbụna ọ na-emepe na Osimiri Guadalquivir dị ka ụzọ isi ruo Kọntinent Ọhụrụ. A na-esikwa n'obere osimiri nke dị ọkara kilomita nke nke àkwà mmiri anọ gafere.
Dị ka isi ihe owuwu, ọ na-aza classicist style nke palladian villa. Facade ya nwere ihe ịchọ mma seramiiki dị egwu na veranda nke arches na-akwado. Nke ikpeazụ nwekwara uko ụlọ ndị mara mma nke ejiri ihe mkpuchi osisi chọọ ya mma. N'ikpeazụ, na nsọtụ nke ụlọ ahụ na-ebili abụọ dị egwu ụlọ elu baroque dị mita iri asaa na anọ, n'agbanyeghị na ọ nwekwara ọnụ ụzọ ámá abụọ, nke Navarra na nke Aragón.
N'aka nke ọzọ, square nwere isi iyi nke etiti, ọrụ nke Vincent Traver na ụlọ akụ iri anọ na asatọ na-anọchi anya ógbè iri anọ na isii na peninsular na Canary na Balearic achipelagos. A haziri ha na mkpụrụedemede na n'oche nke ọ bụla enwere uwe agha ya, maapụ ya na tile Pisan nwere ihe omume dị mkpa sitere na akụkọ ntolite ya.
Plaza Mayor nke Medina del Campo
Collegiate Church nke San Antolín, na Plaza Mayor nke Medina del Campo
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere akụkụ, ọ gaghị abụ na nke a na Medina del Campo ogide ebe a n'etiti ndị kasị ibu square na Spain. Ma anyị chọrọ ịgụnye ya n'ihi na ọ bụ nke kasị ukwuu n'etiti ndị kasị ibu na mba anyị, na mpaghara nke 14 square mita na karịa, dịka ọmụmaatụ, ndị Salamanca ma ọ bụ Madrid.
A maara ya maka Onye isi obodo Plaza de la Hispanidad. Ọ dịghịkwa ihe ga-enwere ndị gara aga anyaụfụ n'ihe banyere uru dị ukwuu. N'ihi na a na-emepụta ya site na ihe owuwu dị ka Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ụlọ Arcos na Peso, ha niile malite na narị afọ nke XNUMX. Mana nke Obí ezenke Ebe obibi ndị nọn nke San José na Santa María Magdalena ma ọ bụ Collegiate Church nke San Antolin.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na ụzọ ya dị iche iche na-ebu aha dị ka Foal, Spices, Jewelry ma ọ bụ Armory dị ka ndị guild na-ebi na ha na-ere ihe ha. Ma ọ bụ na mmalite ya sitere na narị afọ nke iri na atọ, ọ bụ ezie na ụdị dị ugbu a bụ mgbe e mesịrị. N'ọnọdụ ọ bụla, Plaza Mayor of Medina del Campo bụ otu n'ime ndị kasị ochie na mba anyị.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị nnukwu square na Spain. Na-apụghị izere ezere, anyị ahapụla ndị ọzọ dị ka Ogidi nke Zaragoza, na 24 square mita, Castle na Pamplona na 14 ma ọ bụ nke gị Plaza Mayor nke Madrid.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Oghere ndị kacha ibu na Spain
Ihe ị ga-ahụ na Seville n'otu ụbọchị
Anụ ọhịa Sahara